(ကျူးဗား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆောင်ပုဒ်: "Homeland or Death"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: ("The Bayamo Song")
သမ္မတအစိုးရ၊ ကွန်မြူနစ် အစိုးရ
ဂျေ အာ အမ် ဗင်တျူရာ
အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၁၈၆၈
• လွတ်လပ်ရေး (ယူအက်စ်မှ)
မေ ၂၀၊ ၁၉၀၂
ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၁၉၅၉
၄၂,၄၂၆စတုရန်းမိုင် (၁၀၉,၈၈၄ km²) (အဆင့်: ၁၀၅)
၁၁,၂၄၁,၈၉၄ (အဆင့် - ၇၃)
၁၀၂.၃/km² (၂၆၅.၀/sq mi)
$၁၁၄.၁ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၆၃)
$၉,၉၀၀ (အဆင့် - ၈၆)
မြင့် · ၅၃
ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံသည် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်အတွင်းရှိ ကျွန်းနိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျူးဘားနိုင်ငံတွင် ကျူးဘားကျွန်းနှင့် အခြားကျွန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်သော ကျွန်းစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အကြီးဆုံးမြို့မှာ မြို့တော်လည်း ဖြစ်သော ဟာဗားနားမြို့ ဖြစ်သည်။ စန်တီယာဂိုဒီကျုးဘား မှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ ကျုးဘား၏ မြောက်ဘက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် ဘဟားမားစ်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ကေမန်းကျွန်းစု နှင့် ဂျမေကာနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဟေတီနိုင်ငံ နှင့် ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ တို့ တည်ရှိသည်။
ကျူးဘားကျွန်းမှာ အနောက်အိန္ဒိယ ကျွန်းစုများထဲတွင် အကြီးဆုံးနှင့် လူဦးရေအများဆုံး ဖြစ်၏။ ကျွန်း၏ ပုံသဏ္ဌာန် မှာ ငှက်၏လျှာကဲ့သို့ ခပ်ကွေးကွေး ဖြစ်၏။ ကျူဘားကျွန်းသည် မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့အဝင်ဝ အလယ်တွင်ရှိသဖြင့် အဝကို ဝင်ပေါက်နှစ်ပေါက်ဖြစ်အောင် အညီအမျှ ပိုင်းခြားထား သကဲ့သို့ တည်ရှိနေလေသည်။ ထိုကျွန်းသည် ဖလော်ရီဒါ ပြည် နယ် ကီးဝက်မှ မိုင် ၁ဝဝ ခန့် ကွာ၍ ယုကတန်ကျွန်းဆွယ်မှ မိုင် ၁၃ဝ ဝေးသည်။ တောင်ဖက် ၈၅ မိုင်အကွာတွင် ဂျမေးကားကျွန်းနှင့် အရှေ့ဖက် မိုင် ၅ဝ ခန့်အကွာတွင် ဟေးတီး ကျွန်း ရှိလေသည်။ ကျူဘားကျွန်းသည် အလျားမိုင် ၇၃ဝ နှင့် အနံပျမ်းမျှမိုင် ၅ဝ ရှိ၏။ ဥိင်းအော့ပိုင်းအမည်ရှိသော ကျွန်းကလေးကို ထည့်သွင်းရေတွက်မည် ဆိုလျှင် ကျူဘားကျွန်း၏ အကျယ် အဝန်းမှ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၃၄၆၇၄၈ ရှိလေသည်။ လူဦးရေမှာ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ၅၅၂၃ဝဝဝ ဖြစ်၏။ ကျွန်း၏ ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်တွင် ကျွန်းငယ်ကလေးများ၊ ပင်လယ်ကွေ့များ၊ ကျောက်ခက်တန်းများ ပေါများလှ၍ ကမ်းရိုးတန်း၏ အလျားမှာ ၂၂ဝဝ မိုင် ရှိလေသည်။
ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာ အကွေ့အကောက် များပြားလှသဖြင့် သင်္ဘောဆိပ်ကောင်းများ ရှိ၏။ ဆိပ်ကမ်းများတွင်ရှိသည့် ဟာဗားနားမြို့၊ ဆီယင်ဖွေးဂိုးမြို့နှင့် ဆန်တီယာဂိုဒီ ကျူဘားမြို့တို့မှာ ကြီးကျယ်သောသင်္ဘော ဆိပ်မြို့ကြီးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဂွမ်တာနာမိုဆိပ်ကမ်းကို ရေတပ်စခန်းပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ငှါးထားလေသည်။ ကျူဘားကျွန်း၏ မြေမျက်နှာပြင်မှာ မညီညာလှချေ။ မြောက်ဘက်ကမ်းခြေပိုင်းတွင် မြေပြင်သည် အရှေ့ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်သွားရာ၊ ကိပ်မေစီအငူစွန်းတွင် ပေ ၆ဝဝ ခန့် မြင့်လေသည်။ တောင်ဘက် ကမ်းခြေ၌ကား မြေမှာ နိမ့်၍ သဲဆန်လေသည်။ ကျွန်း၏အရှေ့ဘက်တွင် ဆီယယ်ရာမာအက်စတြာတောင်တန်းကြီးသည် ကိပ်ဒီကရုမှ ဆန်တီယာဂိုမြို့အထိ ဆန့်တန်းလျက် တည်ရှိသည်။ ကျူးဗားကျွန်းတွင် မြစ်ချောင်းပေါများသော်လည်း တိုတောင်းသောကြောင့် ရေကြောင်းသွားလာမှုအတွက် အသုံးမဝင်လှချေ။ ဥိရီရိန်းတေးနယ်တွင် ရှိသော ကော်တိုမြစ်သာလျှင် မိုင် ၂၅ဝ ရှည်၍ ၅၅ မိုင်အထိ လှေသင်္ဘော အငယ်စားများ ဆန်တက်သွားလာနိုင်သည်။
ကျွန်း၏တစ်ဝက်ခန့်မှာ သစ်တောများ ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိ၏။ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရသော ထွက်ကုန် များ၏ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနှင့် သစ်တော များမှ ရရှိသောပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။ ကျူးဗားကျွန်းတွင် ကြံပင်၊ ဆေးရွက်၊ ငှက်ပျော၊ ကာဖီစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြ၏။ ထွက်ကုန်၏ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သကြားဖြစ်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယသကြားအထွက်ဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်သည့်ပြင်၊ ပထမတန်း ဆေးရွက်များထွက်သော နိုင်ငံလည်းဖြစ်လေသည်။ ကျူးဗားကျွန်းမှ သံ၊ ကြေးနီ၊ ကရိုမီယမ်၊ မန်ဂနိ စသော သတ္တုများထွက်သည်။ သကြားလုပ်ငန်း၊ အရက်ချက်လုပ်ငန်း၊ ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်၊ ဆပ်ပြာ၊ ဦးထုပ်နှင့် ဖိနပ်လုပ်ငန်း များလည်း ထွန်းကား၍ ကျွန်း၏ လူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း ၂ဝ လောက်မှာ ထိုလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြ လေသည်။ စပိန်လူမျိုးတို့ ကြီးစိုးစဉ်က တိုင်းဦးသားလူမျိုးများအား လွန်စွာနှိပ်စက်သဖြင့် အမျိုးပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်ကြသော အခါ အာဖရိကတိုက်မှ နီးဂရိုးကပ္ပလီလူမျိုးတို့ကို အလုပ်ကြမ်း များ၌ အသုံးပြုရန် ခေါ်ယူရလေသည်။ ကျူးဗားကျွန်း၏လူဦးရေ ရ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူဖြူများဖြစ်၍ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ နီးဂရိုး ကပ္ပလီလူမဲများ ဖြစ်ပြီးလျှင် ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်လေသည်။ ဟာဗားနားမြို့သည် ကျူးဗားကျွန်း၏ မြို့တော်ဖြစ်၍ အကြီးဆုံးမြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့၏လူဦးရေမှာ ၆၇၁၇၆ ယောက်ဖြစ်၍ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ခုရှိ၏။ အခြားမြို့ကြီး များမှာ သင်္ဘောဆိပ်မြို့များဖြစ်သော ဆန်တီယာဂိုဒီကျူးဗားနှင့် ဆီယင်ဖွေးဂိုးတို့ ဖြစ်လေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Anuario Estadístico de Cuba 2010, Oficina Nacional de Estadísticas, República de Cuba. Accessed on September 30, 2011.
↑ Thomas, Hugh (March 1971). Cuba; the Pursuit of Freedom. New York: Harper & Row. ISBN 0060142596။
↑ Thomas, Hugh (1997). The Slave Trade : The Story of the Atlantic Slave Trade, 1440–1870. New York, NY: Simon & Schuster. ISBN 0684835657။
↑ Remarks of Senator John F. Kennedy at Democratic Dinner, Cincinnati, Ohio။ John F. Kennedy Presidential Library & Museum - Jfklibrary.org (1960-10-06)။ 2010-11-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ The World Factbook — Central Intelligence Agency
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျူးဘားနိုင်ငံ&oldid=491667" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၁:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။